| 2019-01-14 Published
निर्माण सञ्चार, विराटनगर । तालाबन्दी, आर्थिक चलखेल, सम्बन्धन विवाद जस्ता विभिन्न कारणले चार्चामा आइरहने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा फेरि तालाबन्दी भएको छ ।
कार्यकारी परिषद् पूर्ण नभएकै बेला उपकुलपति घनश्यामलाल दास र रजिस्ट्रार प्रमिला थापाले सहायक राजिस्ट्रार र सहायक डिन पद सिर्जना गरी विवादास्पद व्यक्तिको नियुक्ति गरेपछि स्थानीय प्राध्यापकहरुले तालाबन्दी गरेका हुन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट प्रागतिशील प्राध्यापक संगठन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस निकट डोमेक्रेटिक प्राध्यापक संघले संयुक्त रुपमा तालाबन्दी गर्दै नियुक्ति बदर सहित पदाधिकारीको राजिनामा माग गरेका छन् ।
नेपाल सरकार र शिक्षामन्त्रालय समक्ष विश्वविद्यालयको विनियम विपरीत (कार्यकारीद्वारा मात्र हुन सक्ने नियुक्ति) गरिएको नियुक्ति बदर सहित पदाधिकारीमाथि कारबाही (पदबाट निलम्बन) सहितको माग गर्दै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय हित तथा सरोकार समाजले विज्ञप्ति सहित निन्दा गरेको छ ।
समाजका अध्यक्ष इन्जिनियर सञ्जीव रोकाहले प्राज्ञिक थलोमा अप्राज्ञिक र विवादस्पद व्यक्ति नियुक्ति गरिनुमा ‘दालमे कुछ काला’ रहेको बताए ।
अध्यक्ष रोकाहाले विश्विद्यालयको कार्यकारी परिषद्मा पूर्ण नभएको बेला यसरी गरिने नियुक्ति कानुनतः बदर भागिदार भएको भन्दै मनोमानी नगर्न उपकुलापतिलाई सजग गराएका छन् ।
आउने चैतमा आफ्नो पदावधि सकिन लागेका उपकुलपति दास सहित रजिस्ट्रार प्रमिला थापाको मनोमानी अन्त्यका लागि उनीहरुको निलम्बन र नियुक्तिको बदर आन्दोलनकारीहरुको प्रमुख मुद्दा रहेको प्राध्यापकहरु बताउँछन् ।
को हुन् ‘विवादास्पद’ राजेश झा ?
राजेश झा, पूर्वाञ्चल विश्विद्यालयभित्र एउटा ‘बदनाम’ पात्र हुन् ।
आफ्नो शैक्षिक योग्यता समेत अस्पष्ट रहेका उनी भने चामत्कारिक रुपले विभिन्न पद सिर्जना गर्दै विगत १८ वर्षदेखि यो विश्वविद्यालयमा जागिर खाँदै आएका छन् ।
यतिबेला रजिस्ट्रार प्रमिलाको बलमा उपकुलपति दास सहितले झाको नियुक्ति सहायक रजिस्ट्रार पदमा गरेपछि विवाद चुलिएको हो ।
आन्दोलनरत प्राध्यापक र हित समाजले उनको नियुक्तिको बदरको माग गरेका छन् ।
उनी यस्तो ‘सदाबहार’ व्यक्ति हुन्, जुनसुकै दल आएपनि, जुनसुकै पदाधिकारी भएपनि, उनका लागि विभिन्न पद सिर्जना गरिन्छ र उनी त्यसमा नियुक्त भइहाल्ने गरेका छन् ।
उनले अलिहेसम्म पनि आफ्नो सक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र विश्वविद्यालयमा नबुझाएको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ ।
‘उनको बेचेलर डिग्री विवादास्पद छ,’ एकजना कर्मचारीले भने ।
उनी यो विश्वविद्यालयमा ०५७–०८ मा छिरेका थिए । आइटीबाट बिई गरेको भनेर छिरेका उनको दाबी झूट रहेको विश्वविद्यालय हित तथा सरोकार समाजको दाबी छ ।
काँग्रेस नेता शेखर कोइराला निकट मानिने उनी सुरुमा काँग्रेस कोटामा छिरेका थिए । शक्ति र सत्ता जसको हुन्छ, त्यसको निकट भइहाल्ने गरेर उनी पदमा टिकिरहने गरेको कर्मचारी बताउँछन् ।
समाजका एक सदस्यले भने, ‘किनकि, उनले बिई गरेका थिए भने त नेपाल इन्जिनियर काउन्सिलबाट पनि त सर्टिफाइड हुन सक्थे नि त । पटक पटक काउन्सिलबाट प्रमाणित गर्न भनियो तर हुन सकेको छैन !’
भारतबाट नक्कली सर्टिफिकेट ल्याएर दादागिरी गर्ने गरेको उनीमाथि आरोप छ ।
‘जति बेला उनले आइटीमा बिई गरेको कुरा गरेका थिए, उनीबारे एक स्थानीय प्राध्यापकले भने, ‘त्यतिबेला यिनी गोल्छा अर्गनाइजेसनमा कामदार थिए ।’
यस अघि यिनका लागि तत्कालीन पदाधिकारीले सहायका डिन पद सिर्जना गरे । जबकि, सहायक डिन हुनका लागि स्नातकोत्तर (एमए) उत्तीर्ण भएको हुनु पर्ने विनियमावलीमै व्यवस्था छ ।
‘तर, उनी त्यसका लागि योग्यताले भ्याउँदैनथ्यो । नियुक्ति खाए कोही बोलेनन्,’ नाम नखोल्ने सर्तमा ती प्राध्यापकले भने ।
६ वर्ष सहयाक डिन खाएका उनको केही समय अघि विश्वविद्यालय समन्वय माहाशाखा पद सिर्जना गरेर त्यसमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
‘त्यो माहाशाखा प्रमुखको अवधि आउने चैत १८ गते सकिँदै छ,’ ती प्राध्यापकले भने, ‘तर त्यस अघि नै सहायक रजिस्ट्रार बन्न सफल भए उनी, यही त हो विधिको सर्वाेच्चता भएको देश हैन र ? उनले व्यंग्य गरे ।
विभिन्न राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठनका नेताहरुसँग आर्थिक साँठगाँठ गर्नसक्ने ताकत नै उनका लागि यो अवसरको मुहान बन्ने गरेको हित तथा सरोकार समाजका एक सदस्यको आरोप छ ।
यस अघि पनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट हुने सम्बन्धनका विषयमा आर्थिक चलखेलमा पटक पटक नाम मुछिदै आउने भित्र उनी पर्दथे ।
विद्यार्थी नेताहरुको ‘आर्थिक’ थलोः एउटा दलको मान्छे अर्कै दलको विद्यार्थी नेताको दबाबमा हुन्छ नियुक्ति !
विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरु समेत पटक पटक आर्थिक लेनदेनको विवादमा मुछिने गरेको यो विश्वविद्यालय पछिल्ला दिनमा विद्यार्थी नेताहरुको समेत ‘हिडेन’ आयआर्जनको थलोका रुपमा स्थापित भएको कार्यरत प्राध्यापकहरु नै स्वीकार गर्छन् ।
विद्यार्थी नेताहरु र पदाधिकारीकै सल्लाहमा आर्थिक लेनदेनका लागि विभिन्न निहुँमा तालाबन्दी गर्ने गरेको विद्यार्थी र कर्मचारीहरुको पनि आरोप छ ।
यस पटक पनि सत्तारुढ दल निकट विद्यार्थी संगठन र प्रतिपक्षी दलका विद्यार्थी संगठनका उच्च नेताहरुकै संलग्नतामा उनलाई अवैधानिक नियुक्तिका लागि दबाब दिएको खुलासा भएपछि हित तथा सरोकार समाजले त्यसको छानबिन गर्ने भएको छ ।
प्रमिला थापाः राजस्ट्रारको झनै हुने गर्छ ‘कमाल’
विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक स्थलमा पनि अप्रज्ञिक व्यक्ति उच्चपदमा आसीन छन् भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ ।
तर अचम्म नमाने हुन्छ । किनकि, बेचेलर डिग्री पनि उत्तीर्ण नगरेका व्यक्ति पदाधिकारी रहेको विश्वविद्यालय हो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी, जुन विश्वविद्यालयका राजिस्ट्रार (कुलसचिव) थापाको प्राज्ञिक क्षमता माथि प्रश्न उठिरहँदै गर्दा झन्डै २ वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले उनलाई कुलसचिव जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति गरेको थियो ।
थापा राजिस्ट्रार बन्नु अघि काठमाडौंमा रहेको एउटा निजी कलेजको ‘यती हेल्थ इन्स्टिच्युट’ की प्रशासनमा कार्यरत थिइन् ।
लागनी समेत रहेको र सञ्चालकको भूमिकामा रहँदै गर्दा उनले झन्डै ५ वर्ष अघि फोरम तत्कालीन लोकतान्त्रिकका तर्फबाट उनी सहायक डिन पदमा नियुक्ति खान सफल रहिन् । यो पदमा नियुक्ति हुने बित्तिकै उनी दुइटा कुराले विवादमा तानिइन् ।
‘आर्थिक चलखेलबाट नियुक्ति खाएको’ ‘शैक्षिक योग्यता’ कति हो भन्ने नै स्पष्ट नभएको ।
रजिस्ट्रार जस्तो गरिमामय पदमा रहेकी उनलाई कार्यक्रम सञ्चालनदेखि विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम बजेट तर्जुमा समेत गर्न नआउने विश्वविद्यालयकै कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
त्यतिमात्रै हैन, उनी पदमा आएसँगै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने कुरामा चलखेल बढेको स्थानीय अभिभावकहरुको आरोप छ ।
पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालय नै यस्तो विश्वविद्यालय हो, यसभित्र विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरु पनि आर्थिक चलखेलमा मुछिदै आएका छन् ।
सम्बन्धनको विषयलाई लिएर विद्यार्थी नेतादेखि विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरु मुछिने चलन यहाँका लागि सामान्य नै भइसकेको छ । विवादास्पद बन्दै गएपछि केही बेलादेखि भने सम्बन्धन दिने कुरा रोकिएको छ ।
रजिस्ट्रार थापाबारे लाग्ने अर्काे आरोप पनि छ, नेपाली सेनामा कार्यरत आफ्नो श्रीमान्को नाउँमा दादागिरी गर्ने र आर्थिक चलखेल गर्ने ।
उनका श्रीमान् बेलायतस्थित दूतावास सुरक्षामा जागिरे छन् । तर उनी श्रीमान्को नाम प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडेर कर्मचारी र प्रशासनमा ‘पावर’को धाक लगाउने र स्टाफ माथि दुव्र्यवाहर गर्ने गरेको कर्मचारी प्रशासनको आरोप छ ।
तस्वीर आफैं बोल्छः न वेभसाइट अपडेट, न कुनै इन्फर्मेसन
११५ वटा कलेज र करिब ४० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको यो विश्वविद्यालयको भविष्य कस्तो होला, तर वर्तमान भने सम्मानजनक छैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछि लगभग सबैभन्दा बढी फेकल्टी र जग्गा भएको विश्विद्यालय पनि यही नै हो ।
आजको युगमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी कुनै इन्फरमेसन खोज्ने हो भने यसको वेभसाइट अपडेट छैन, न त कुनै फेकल्टी, पदाधिकारी र क्याम्पसहरुको सूचना त्यहाँ राखिएको छ ।
आर्थिक पदका लागि महत्त्वपूर्ण पद राजिस्ट्रार थापा आफ्नो मोबाइल र फेसबुक समेतबाट बाहिर रहने गरेको विद्यार्थीहरुको समेत गुनासो छ ।
‘आफूलाई परेको बेला सम्पर्क गर्दा, फेसबुकबाट सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि उहाँसँग कुनै सम्पर्क र सहयोग हुनै सक्तैन,’ अनुकुल शर्मा (नाम परिवर्तन) विद्यार्थीले भने ।
हित समाज र प्राध्यापकहरुद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति
सोमबार, ३० पुस, ०७५